अनिताको तीज गीतमा प्रिज्मा-प्रिन्सीसँग बलेको नृत्य (भिडियो) Canada Nepal
विरामीको मृत्युपछि वीरगन्जमा तनाव, प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज
काठमाण्डौ। गायिका तथा संचारकर्मी अनिता चलाउनेले हरेक बर्ष जस्तै यसपटक पनि तीज गीत सार्वजनिक गरेकी छन् । बुधवार उनको ‘यस्तो बनोस् मेरो तीज’को भिडियो रिलीज भएको हो । बिपिन किरणका शब्द तथा दीपक शर्माको संगीतको रहेको गीतमा अनिताले स्वर दिएकी छन् ।
यस गीतको भिडियोमा चर्चित जुम्ल्याहा दिदि बहिनी प्रिज्मा खतिवडा र प्रिन्सी खतिवडाको साथमा ‘बले’ नामले परिचित सागर लम्सालले अभिनय गरेका छन् । भिडियोका निर्देशक गम्भीर बिष्ट हुन् । दर्जनौँ म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेका प्रिज्मा र प्रिन्सीले तीजको गीतमा भने पहिलो पटक अभिनय गरेका हुन् ।
गीत रिलीज पछि गायिका चलाउनेले आफुले भड्किलो गीत नगाएर नेपालको मौलिक चाड हरितालिका तीजको मर्म अनुसारको गीत तथा भिडियो बनाएको बताईन् । ‘मैले यस गीतमा मौलिकता मर्न दिएकी छैन । गीतका शब्द तथा संगीत र भिडियो पनि मौलिक हिसाबको छ । यो गीतले तीज गीतको नाममा आइरहेका भड्किला गीत भन्दा फरक र तीजको वास्तविक मर्म झल्काउँछ । अडियो सँगै भिडियोमा पनि उत्तिकै मेहनत गरेका छौँ’, अनिताले भनिन् ।
केहि महिना अघि ‘विदेशको पिआर छ’ बोलको गीत हिट बनाएकी चलाउनेले ‘यस्तो बनोस् मेरो तीज’ गीत यस बर्षकै उत्कृष्ट हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । अनिता विगत पाँच बर्ष देखी मीडिया र संगीतमा आवद्द छन् ।
आषाढ २४, २०७७ बुधवार ११:५४:०० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - बलिउडका चर्चित अभिनेता संजय दत्त अस्पतालको आइसियूमा भर्ना भएका छन् । उनलाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो ।
भारतिय मिडियाका अनुसार उनलाई सास फेर्न समस्या भएको र लीलावती अस्पतालको आइसियूमा राखिएको जनाइएको छ । उनमा कोरोनाको आशंका गरिएको छ । उनको कोरोना परिक्षणको लागि स्वाब संकलन गरिएको छ ।
यस्तै अभिनेता संजयले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो स्वास्थ्य बारे जानकारी गराएका छन् । उनले आफु ठिक भएको र लिलावती अस्पतालका डाक्टर, नर्स र स्टाफको सहयोगले एक दुई दिनमा घर फर्कने बताएका छन् ।
पछिल्लो समय बलिउडका कलाकारहरुमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । संजय दत्तलाई पनि सास फेर्न समस्या भएपछि कोरोनाको आशंका गरिएको छ । कोरोना रिपोर्ट आउन बाकीँ रहेको छ ।
श्रावण २५, २०७७ आइतवार ०८:२९:४४ बजे : प्रकाशित
गायक किरण भुजेलले फरक शैलीको तीज गीत गाएका छन् । शेरा थामीको संगीत रहेको ‘बम बम भोले’ बोलको गीतमा किरणको साथमा बबिना किराँतीको स्वर रहेको छ ।
विकास सिवाकोटीको शब्द रचना रहेको गीत तीजको भएतापनि शैली भने अलग छ । भिडियोमा किरण र बबिनाको साथमा निक्स शर्मा र बिदिशा कार्कीको अभिनय रहेको छ ।
भिडियोको निर्देशन मौसम हिमालीले गरेका छन् । अनिल के. मानन्धरले छायांकन गरेको भिडियोलाई प्रविन भट्टले सम्पादन गरेका छन् ।
श्रावण २४, २०७७ शनिवार २०:५०:०१ बजे : प्रकाशित
पत्रकार सुवेदीले 'दारा निस्केको महानायिका' भनेपछि यसरी आक्रोश पोखिन् पुजाले
काठमाडौं । अभिनेत्री पुजा शर्माले सिने पत्रकार तथा निर्देशक प्रकाश सुवेदीले आफुविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ती प्रति आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले पत्रकारले नै बोलाएर अपमान गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोस पोखेकी छिन् ।
उनले कति चुप रहने ? कति सहने ? भन्दै अन्तरवार्ताका लागि पत्रकारले बोलाउँदा आउँदिन भनिदिएकै कारण अपमान हुन परेको बताएकी छिन् । अन्तरवार्ताका लागि आउँदिन भन्दा एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रममै आफुलाई 'दारा निस्केको महानायिका' भनेर शारिरिक हाउभाउ लाइ लक्षित गरेर अत्यन्त क्षुब्ध ढंगले प्रस्तुत गरेर मानहानि गरेको बताएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन् - "कतिचूप रहने ?कति सहने? Prime tv मा अन्तर्वार्तामा बोलाइयो गएँ सामान्य ज्ञान संग सम्बन्धित प्रश्न गरियो Interview चल्दा चल्दै मैले पत्रकार प्रकाश सुबेदीजी लाइ मैले राम्रो गर्न सकिन प्लिज यो काटिदिनुस, भने मान्नु भएन
त्यो चिज प्रसारण भयो viral भयो मेरो थुप्रै troll हरू बने, आफ्नै गल्ति हो भनेर चूपचाप बसे , पछि जब प्रकाशजी Ap1 जानु भो मलाइ पुन: interview मा आउ पुजा भनेर भन्नु भो म मानसिक तनाब झेलिरहेको थिए, अब फेरी पूरानो गल्ति कसरी गर्न सक्थे ?
म त्रसित पनि थिए ,तसैले मैले सरी दाइ म आउन सक्दिन भने , तर त्यसपछि उहॉले आफ्नो कार्यक्रम मा मलाइ लक्षित गरेर “ दारा निस्केको, महानायिका” भनेर शारिरिक हाउभाउ लाइ लक्षित गरेर अत्यन्त क्षुब्ध ढंगले प्रस्तुत गरेर मेरो मानहानि गर्न कुनै कसर छोड्नु भएन ,
के एक पत्रकारले यस्तो अशिष्ट ,अभद्र र अमर्यादित शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ ? पत्रकारले गर्न सक्ला मानौ, के टेलिभिजन मा यस्ता असभ्य कुरा सम्पादन गर्ने कुनै निकाए छैन ?हरेक troll को शिकार देखि , यस्तो अभद्र व्यवहार प्रति हामि कलाकार सधै मौन नै रहनु पर्ने ? अहिले आएर उहॉले “ मैले कसैको नाम तोकेको छैन “ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ के यसरी पन्छिन मिल्छ ?
म नभए पनि कोहि अभिनेत्री लाइ त दारे अभिनेत्री सम्बोधन गरिएकै छ त्यॉहा !हामि कलाकार हरू कहिले सम्म पालै पालो यस्तो अतिबादको शिकार भैरहने? हाम्रा गल्ति छन्, होलान् पनि त्यो कुरा पत्रकार मित्रहरू ले औल्याइ दिनु पर्छ । तर यो ढंगको प्रस्तुतीकरण ले के पत्रकारिता को पनि इज़्ज़त बढ्छ त? कृपया सूझाब सल्लाह को अपेक्षा गर्द्छू ! यंहाहरूको सल्लाह अनुसार अगाढि बढ्ने छू ! धन्यवाद!!"
पछिल्लो समय कलाकारहरु अन्तरवार्तामा बोल्न नजान्दा ट्रोलको शिकार हुन थालेका छन् । यसअघि पनि पत्रकार सुवेदीको कार्यक्रममा सोधिएका सामान्य ज्ञानसंग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिन नजान्दा पुजा ट्रोल बनेकी थिइन् ।
श्रावण २४, २०७७ शनिवार १२:१७:३९ बजे : प्रकाशित
# पुजा शर्मा
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित अभिनेता अनमोल केसीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । उनी यमाहाको स्कुटरको विज्ञापनमा खेलेका थिए । स्कुटरको विज्ञापनमा मा रहेका एक सदस्यमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएपछि उनको पिसीआर परिक्षण गरिएको थियो ।
एक जनामा कोरोना देखिएपछि यूनिट कै कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । अनमोलको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको जनाइएको छ। पछिल्लो समय अनमोल विज्ञापन लगायतका काममा ब्यस्त भइरहेका छन् ।
श्रावण २४, २०७७ शनिवार १२:०१:०५ बजे : प्रकाशित
हास्य कलाकार किरण केसी भन्छन्, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई दण्ड दिऔं
काठमाडौं । हास्य कलाकार एवं निर्माण किरण केसी राता मकैले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई दण्ड दिन माग गरेका छन् । कोरोना महामारीका बेला पनि मास्क, स्यानिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य र म्याद नाघेको वस्तु बिक्री गर्नेलाई निरुत्साहित गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
कलाकार केसीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै उपभोक्ताको हकहितमा आवाज उठाएका हुन् । उनले कुनै सामान खरिद गर्दा म्याद, गुणस्तर, ट्याग, आधिकारिक बिल हेरी सधैं सजग र सचेत हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘वर्तमान संकट एवं विषम परिस्थितिमा विशेषत हामीले आप्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु नै प्रमुख दायित्व हो । पक्कै पनि राम्रो स्वास्थ्यका लागि स्वस्थ खाना र सरसफाइ प्रमुख कुरा हो । यस्तो अवस्थामा पनि अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री मास्क सेनिटाईजर पञ्जा अन्य अति आवश्यकीय औषधिहरुको कृत्रिम अभाव सिर्र्जना गरी बढी मूल्यमा विक्री गर्ने अखाद्य र म्याद नाघेको बस्तुको विक्री वितरण गरी सर्वसाधारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्यलाई निरुत्साहित गरी त्यस्तालाई दण्ड दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गरौं । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अनियमितता जस्ता निन्दनीय कार्यको खुलेर विरोध गरौं । सम्पूर्ण सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुलाई पनि कुनै सामान खरिद गर्दा म्याद, गुणस्तर, ट्याग, आधिकारिक बिल हेरी सधै सजग र सचेत हुन पनि हार्दिक आह्वान गर्दछु । कालोबजारी भ्रष्टाचार, अनियमिततासम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराई कारवाहीमा सहयोग पुर्याउन पनि अनुरोध गर्दछु।’
श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १८:५५:१९ बजे : प्रकाशित
आदित्य नारायणको आज जन्मदिन, सानैदेखी थिए मिहेनती
काठमाडौं - बलिउडका चर्चित गायक, संगीतकार तथा अभिनेता आदित्य नारायण झाको आज जन्मदिन परेको छ । आज उनले आफ्नो ३३ औं जन्मदिन मनाउदैछन् । उनी १९८७ अगष्ट ६ मा भारतको मुम्बईमा जन्मिएका हुन् ।
उनी प्रसिद्ध बलिउड गायक उदित नारायण झाका छोरा हुन्। गायक आदित्यले सानै उमेरदेखी गाउन शुरु गरेर चर्चामा आएका थिए । उनले हालसम्म धेरै गीतहरु गाइसकेका छन् ।
उनको छोटा बच्चा जान के गीतले निकै चर्चा पाएको थियो । उनी अहिले इन्डियन आइडल ११ का होस्ट रहेका छन् । केही समयदेखी उनी गायिका नेहा कक्कड़सँगको प्रेम सम्बन्धका कारण चर्चामा आएका थिए ।
श्रावण २३, २०७७ शुक्रवार १८:५१:१० बजे : प्रकाशित